Totmôsisy III - Wikipedia
Anarana Totmôsisy III
Teraka 1 Janoary -1481
Maty 1 Janoary -1425
I Totmôsisy III dia faraôn’i Ejipta tamin’ny taona 1479 hatramin’ny 1424 tal. J.K. nandritra ny vanimpotoan’ny Empira Vaovao. Isan’ireo faraôna nahavita zavatra betsaka izy. Teraka tamin’ny taona 1481 tal. J.K. ary maty tamin’ny taona 1425 tal. J.K.
Izy no faraôna fahadimy tao amin’ny faianakavia-manjaka (dinastia) faha-18. Zanakalahin’i Totmôsisy II sady mpandimby azy izy. Nanambady ny anabavin tsy iray reny aminy izy, dia ny zanak’i Hatsepsota vadin-drainy. Mbola kely izy no nandimby an-drainy tamin’ny taona 1479 ka nataon’i Hatsepsota rafozany izay tsy hampisongadina azy. I Hatsepsota noho izany no tena nanapaka ny tany ka anarany fotsiny ny maha mpanjaka an’i Totmôsisy III. Rehefa tonga taona i Totmôsisy dia naira-nanapaka tamin’i Hatsepsota, nefa tamin’ny nahafatesan’i Hatsepsota tamin’ny taona 1458 dia nopotehiny ny trano sy ny zavatra hafa naorin’i Hatsepsota mba hamafany tanteraka ny anarany tsy hisy hahatadidy.
Nanjaka tokana amin’izay i Totmôsisy III nanomboka tamin’ny taona 1458 ka nanomboka nanao fakana tany tamin’ny alalan’ny adin-tafika izay tsy isy toa azy hatramin’izay nandritra ny tantaran’i Ejipta tamin’ny Andro Taloha. Niditra tany Siria ny tafik’i Totmôsisy ary nanamontsana ny tafika siriana tao amin’ny lemak’i Jezreela. Resy ny Siriana ka nitady fialofana tany Megidô.
Taorian’izany, nandritra ny fotoana nikononkononan’ny Mitaniana (mponin’i Mitany) hanao fikomiana tao amin’ny tanana maro tao Siria sy tao Foinikia (na Fenisia), izay teo ambany ziogan’i Ejipta, dia niady tamin’i Mitany, izay nifehy ny ampahany be aminn’ny tapany avaratr’i Mesôpôtamia, i Totmôsisy III. Nidiran’ny tafik’i Totmôsisy ny taniny ary maro ny tanàna azony ka niitatra noho izany ny heriny tany avaratr’i Palestina sy tany avaratr’i Foinikia (na Fenisia). Nanorenany tsangambato ny e amoron’i Eofrata tao amin’io faritra io mba ho famantarana ny efi-tanin’i Ejipta. Nanitatra ny fari-tanin’i Ejipta hatrany Nobia ko izy.
Aorian’ireo fandresena miezinezina azon’ny tafiny i Totmôsisy III dia mamatsy ireo tempoly maro tany Ejipta tamin’ny alalan’ny entana voababony sy ny hetra voangony. Niha nanan-karena noho izany ny Tempoly Lehiben’i Karnaka ary noraiketina tao an-tsoratra eny amin’ny rindrin’ny tempoly ny zava-bitany isan-taona. Nanao asa fanorenaana maro ko aizy manerana ny tany notapahiny, indrindra tany Heliôpôlisy sy tany Memfisy ary tany Abidôsy.
Rehefa maty i Totmôsisy III dia i Amenôfisy II zanany no nandimby azy teo amin’ny fitondrana. Ny fatin’i Totmôsisy III voatahiry dia hitan’ny mpikaroka tany Deir el-Bahari.
I Thutmose II no rainy. Ny vadiny dia Satiah. Ny zanany dia Amenemhat, Meritamen.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Totmôsisy_III&oldid=993946"
Teraka tamin'ny taona -1481
Maty tamin'ny taona -1425
Sokajy misitrika 1 :
Voaova farany tamin'ny 12 Jolay 2020 amin'ny 15:04 ity pejy ity.